Ukuvakasha Kwefektri - UJesson Flag Arts & Crafts Co., Ltd.
Umhlangano wokusebenzela omkhulu we-CFM's 6000 square meter (cishe u-65,000 square foot) uyakwazi ukwakha cishe noma yimuphi umklamo wangokwezifiso noma umkhiqizo okhombisa ukuphelela ngoba into ngayinye igcwaliswa ngamakhompyutha asetshenziswa ngabasebenzi kanye nohlelo lokuphathwa kwedijithali, ukuqinisekisa ukufana nomkhiqizo wekhwalithi ngaso sonke isikhathi .
Ukuze uhambisane nokufunwayo, umhlangano wokusebenzela weCFM usebenzisa amaphrinta athuthukile futhi anejubane elikhulu, angenza umkhiqizo olinganiselwa nsuku zonke ongaba ngu-5,000 m2. Imishini isebenza amahora angama-24 ngosuku ukuqinisekisa isikhathi sokuhola esisheshayo.
Abasebenzi bethu abangama-110-plus banamakhono ezinhlobonhlobo zamasu wokuphrinta, okusho ukuthi ungazenzela ngokuphelele izinto zakho zokukhangisa ngezidingo zakho. Uma kukhulunywa ngezithombe eziyinkimbinkimbi nezithombe ezinokulungiswa okuphezulu noma ukuphuma kombala, cabanga ngokunyathelisa kwedijithali. Ukuphrinta kokudlulisa ukushisa nakho kuyindlela uma kunesidingo esikhulu semibala.
Ngoba i-CFM inokuningi kakhulu engakunikela, kungaba lula ukuzizwa ukhungathekile. Uma ungaqiniseki ukuthi iyiphi inqubo yokuphrinta noma umkhiqizo ofanele wena, noma uma udinga usizo lokuklama ilogo noma isithombe, xhumana nathi namuhla. Ithimba lethu elinobungane nelinolwazi lingajabula ukukusiza.